'सरकार ! लकडाउनको विकल्प पनि खाेजाै‌ँ'
दिनेश गौतम काठमाडौं, ६ जेठ
कोरोना भाइरस (कोभिड– १९) को महामारीका कारण बन्दाबन्दी भएको ५७ दिन बित्यो । चीन, युरोप र अमेरिकाजस्ता शक्ति राष्ट्रमा आगोसरि फैलँदा नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या कम छ ।
पछिल्लो तथ्यांकअनुसार विश्वमा संक्रमितको संख्या ४६ लाख पुगेको छ । मृत्यु हुनेको संख्या ३ लाख छ, जसमा नेपालमा नेपालमा संक्रमितको संख्या ४ सय २ पुगेको छ । यद्यपि, पछिल्लो २ सातामा संक्रमितको संख्या बढिरहेको छ । दुई जनाको मृत्युसमेत भयो । परीक्षणको दायर बढाउने हो संक्रमितको संख्या अझै बढ्ने विज्ञहरूको दाबी छ ।
जब संक्रमितको संख्या बढ्छ, तब सरकारले लकडाउन बढाउँछ । कोरोनाको मात्र होइन, एचआईभीजस्ता भाइरसको समेत अहिलेसम्म भ्याक्सिन बनेको छैन ।
कोरोना भाइरसको भ्याक्सिन नबनेसम्म रोग नियन्त्रण गर्न गाह्रो छ । त्यसो हो भने भ्याक्सिन नबनेसम्म लकडाउन मात्रै गरिरहने ? यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने र लकडाउनको विकल्प के हो ? सरकारले ठोस योजना बनाउन सकेको छैन ।
संक्रमितको संख्या बढे अस्पतालले थेग्न सक्छन् ? के छ सरकारी योजना ?
लकडाउनको विकल्प खोजौँ
विज्ञहरूले लकडाउननको विकल्प खोज्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । ‘जनस्वास्थ्यको विषयमा राज्य जिम्मेवार नबन्दा अहिले समस्या आएको हो,’ डा. अरुण उप्रेती भन्छिन्, ‘२०४६ सालपछि बनेका सरकारले जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा कामै गरेनन् । ’
अहिले नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षमा भए पनि २०४६ सालपछि धेरै पटक सरकारको नेतृत्व गर्दा जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा काम नगरेकाले अहिले समस्या आएको उनको बुझाइ छ । ‘अहिलेको सरकारले पनि काम गर्न सकेको छैन,’ उनले भनिन्, ‘तत्काल सुधार गर्न पनि सकिँदैन । ०४६ सालदेखि नै जनस्वास्थ्यमाथि खेलबाड भएको परिणाम आज भोगिरहेका छौँ ।’
लकडाउनको विकल्प खोज्नु सरकारलाई उनको सुझाव छ । ‘कुनै ठाउँमा २/४ जाना संक्रमित थपियो कि लकडाउन थपिहाल्ने । कोरोनाको उपचार गर्ने अस्पताल, भेन्टिलेटर, अक्सिजन थपेको खोइ ? लकडाउन थपिनु मात्र सोलुसन होइन ।’
संक्रमित सबैलाई अस्पतालमा राख्नु पर्दैन
संक्रमित सबैलाई अस्पतालमा लानु नपर्नेमा उनले जोड दिइन् । ‘सामान्य संक्रमितलाई पनि अस्पतालमा राखिएको छ,’ उनले भनिन्, ‘जटिल बिरामीलाई अस्पतालमा र सामान्यलाई घर वा क्वारेन्टाइनमै राख्नुपर्छ । सबैलाई अस्पतालमा राख्न सम्भव छैन ।’
५३ जना आमा बन्दा मरे
कोरोनाका कारण अन्य बिरामीलाई असर परेको छ । दीर्घ रोगी, गर्भवती महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक प्रभावित भएका छन् ।
‘लकडाउनको अवधिमा स्वास्थ्य चौकी जान नपाएर ५३ जना आमा बन्दा मरे । यो देशको ठूलो विषय हो । संसदमा छलफल चलाउनु पर्ने हो । तर नजरअन्दाज गरिएको छ,’ उनले भनिन् ।
सावधान ! आरडीटी स्वास्थ्यमाथि खेलवाड हो, पीसीआर गराऔँ
धनी र गरिबको खाडल
कोरोनाले धनी र गरिबको खाडल देखाएको उनको बुझाइ छ । ‘बाक्लो बस्तीमा गरिब मजदुर बस्छन् । दूरी कायम गरेर बस्ने अवस्था छैन । लकडाउन भएपछि बिरामीलाई अस्पताल लान सकिएको छैन,’ उनले भनिन्, ‘कोरोना भाइरस ५ –१० वर्षसम्म जाला । धनी र गरिबको खाडल बढिरहेको छ । अनि लकडाउन मात्र गरिरहने ?’
राहतको नाममा अमानवीय अपराध
राहतको नाममा कुहिएको चामल बाँडेर अमानवीय अपराध गरेको उनले बताइन् । ‘राहत भनेर कुहिएको चामल र दाल दिइएको छ,’ डा. उप्रेतीले भनिन्, ‘यो अमानवीय अपराध हो ।’ जो कुपोषित छ, उसलाई कुहिएको चामल दिएर हुन्छ ?’
डा. उप्रेतीका अनुसार ५ वर्षमुनिका बालबालिकालाई दादुरालगायतका भ्याक्सिन नदिएर थप समस्या निम्तिनेछ ।
बालबालिकालाई भ्याक्सिन नलाएर अर्को महामारी
‘दादुराको भ्याक्सिन अहिले दिएन भने अर्को समस्या आउँछ,’ उनले भनिन्, ‘बालबालिकामा भ्याकुते रोग, पोलियो भयो भने के हुन्छ ?’
लकडाउन मात्र सोलुसन होइन
अर्का जनस्वास्थ्यविद् डाक्टर पदम सिम्खडाले पनि लकडाउनको विकल्प खोज्नुपर्ने बताए । ‘लकडाउन थप्ने काम मात्र भएको छ । तर, यसको विकल्प के हो, सरकारले बनाउन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘लकडाउन आवश्यक छ । तर, लकडाउन मात्र सोलुसन होइन ।'
तयारी गर्न ढिला
कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणमा सरकार चुकेको उनको बुझाइ छ । ‘अहिलेसम्म तयारी समयको थियो । तयारी गर्न ढिला भइसकेको छ । तर अति ढिला पनि भएको छैन । खराब दिन आउन नदिन तयारी छिटो गनुपर्छ,’ उनले भने । अहिलेको पूर्वाधारले संक्रमितको संख्या बढ्दै गए धान्न नसक्ने उनको दाबी छ ।
विज्ञ भन्छन् : काेरोना परीक्षणमा सरकारले झुक्यायो, अब खराब दिन आउँछन्
पूर्वाधार निर्माणमा जोड
‘युरोप, अमेरिका, बेलायतजस्ता सुविधासम्पन्न देशमा भएका अस्पताललाई समेत हम्मेहम्मे परेको छ,’ उनले भने, ‘अहिले न्यून संख्या भएकै बेलामा पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिनुपर्छ ।’
स्वास्थ्य तथा जनासंख्या मन्त्रालयका अनुसार १ सय २७ कोभिड क्लिनिक छन् । २६ हजार ९ सय ३० वडा बेड छन्, जसमा आईसीयू बेड १५ सय ९५ वटा छन् । भेन्टिलेटर ८ सय ४० वटा छन् । आईसीयू सुविधा भएका अस्पतालको संख्या १ सय ९४ छ । आइसोलेसन बेड ३ हजार ७६ वटा छन् । कोरोनाको हब अस्पताल २५ वटा मात्र ताेकिएको छ ।
यति संरचनाले मात्र धान्न सक्दैन
‘यति संरचनाले मात्र धान्न सक्दैन । हजारौँ अस्पताल, बेड, भेन्टिलेटर, अक्सिजन भएका देशले समेत सबै संक्रमितको उपचार गर्न सकेका छैनन् । त्यसैले लकडाउनसँगै पूर्वाधारमा पनि जोड दिनुपर्छ,’ उनले भने ।
कोरोना संक्रमितलाई के खुवाउने ? के नखुवाउने ?
स्तनपान गराउँदा आमाबाट शिशुमा कोरोना सर्दैन
कोरोना लागेकाे कति दिनमा ठीक हुन्छ ? कुन अवस्थामा पुगेपछि हुन्छ मृत्यु ?
छुनै नमिल्ने कोरोना संक्रमितकाे कसरी हुन्छ उपचार ?
प्रकाशित मिति: मंगलबार, जेठ ६, २०७७, १८:२०:००
अमेरिकामा एकै दिन ७४३ जनाले कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाए
लकडाउनका बेला बढ्दो सुत्केरी र गर्भवतीको मृत्युका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण
५ दिन थुन्न अनुमति पाएको प्रहरीले भीआईपी जुवाडेलाई राजनीतिक दबाबमा आजै छोड्दै
सरकार ! सामुदायिक विद्यालयलाई निजीकरण गर्न खोजिएको हो ?